Makurukota ane mukurumbira munyaya dzekushanyirwa kwenyika votanga kutaura paAfrica Tourism Day
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » African Tourism Bhodhi » Makurukota ane mukurumbira munyaya dzekushanyirwa kwenyika votanga kutaura paAfrica Tourism Day
African Tourism Bhodhi • Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • nhau • Nigeria Breaking News • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Gurukota rezvekushanyirwa kweJamaica Vanoremekedzwa Edmund Bartlett vachange vari pakati pemakurukota mashanu ezvekushanya achataura panguva yechiitiko icho chakakwezva vanhu vakakosha kuti vagovane ruzivo rwavo uye maonero avo pakushanya kweAfrica panguva uye mushure meCOVID-19 denda.
Makurukota mashanu ane mukurumbira ekushanyirwa kwenyika ave kuda kutora chikamu, vozotaura nezvechirongwa chechipiri cheAfrica Tourism Day chiri kutarisirwa kuitwa muLagos, guta guru reNigeria pakati pemangwanani Chishanu chino.
Yechipiri Edition yeAfrica Tourism Day (ATD) ichaitika muguta guru rekutengesa reNigeria kubva Mbudzi 25 kusvika Mbudzi 26, 2021.
eTurboNews ichagara ichiyerera Africa Tourism Day, uye vaverengi vanogona kuenda kuZoom.
Chiitiko ichi chiri mukudyidzana ne African Tourism Bhodhi uye World Tourism Network
Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika muJamaica Dr. Edmund Bartlett
Mamwe makurukota ari kuda kutora chikamu pachiitiko ichi ndiVaMoses Vilakati, Gurukota rezvekushanyirwa nemamiriro ekunze eEswatini, Hon Phildah Nani Kereng, gurukota reBotswana reEnvironment, Natural Resources, Conservation and Tourism.
Vamwe ndiDr. Memunatu Pratt, Gurukota reSierra Leone reKushanyirwa uye Tsika uye Dr. Damas Ndumbaro, Gurukota reTanzania reZviwanikwa uye Tourism.
Aimbova Gurukota reKushanya neTsika reRepublic yeSeychelles uye Mutungamiriri we African Tourism Bhodhi (ATB) Hon. Alain St. Ange mumwe munhu ane mukurumbira muindasitiri yezvekushanya muAfrica kuzopindawo pachiitiko cheAfrican Tourism Day.
Mutungamiri weAfrican Tourism Board (ATB) Hon. Alain St. Ange
African Tourism Bhodhi Executive Chairman Mr. Cuthbert Ncube yagadzirira kukurukura uye kugovana nyaya dzakafanira pamusoro pekushanyirwa kweAfrica kwakapfuma nenhaka panguva yechiitiko cheATD.
Mukuru weAfrican Tourism Board VaCuthbert Ncube
Chiitiko cheATD chakakwezvawo vakuru vezvekushanya muAfrica yose, United States of America, Europe nedzimwe nyika pasi rose kuti vakurukure, vagovane mazano akanaka uye vachinjane zvavakasangana nazvo nenzira dzakanakisa dzinozobatsira kusimudzira uye kushambadzira kushanya kweAfrica. uye Africa yose pamisika yevashanyi vepasi rose.
Iine Dingindira re "Kupindirana kweKushanya, Kutengeserana uye Kusimba, Zvinokosha zveAfrica, Panguva uye Post COVID-19 Era", chiitiko cheChipiri cheAfrica Tourism Day chicharatidza hupfumi hwenhaka uye masevhisi anopihwa muAfrica tourism sector.
Sangano reInternational Organisation Committee (IOC) razivisa kuti richaitwa kwechipiri chezuva reAfrica Tourism Day, iro rinonzi richaitwa zvachose.
Zuva reAfrica Tourism Day rakatsaurirwa kutarisa kondinendi yeAfrica sechiitiko chemukondinendi, icho chinounganidza hurumende, masangano emakambani, vane chekuita nekushanya uye nevamwe vari muchirongwa chekushanya kuti vagadzirise nyaya dzine chekuita nebazi iri.
ATD yakagadzirwa panguva iyoyo yakazvipira kuunza vanhu vakakosha pakushanya vanosanganisira vanogadzira mitemo yenyika, vane chekuita nebhizinesi, vashanyi nevamwe vanoita zvekushanya vachipemberera hupfumi hweAfrica, vakadaro Mai Abigail Adesina Olagbaye veDesigo Tourism Development and Facility Management Company.
Zvinangwa zveATD, pakati pezvimwe, ndezvekupemberera nekuratidzira Africa padanho repasi rose, simba rakasiyana-siyana retsika dzayo dzakasiyana-siyana uye kushanyirwa kwehupfumi, nhaka nezvazvinogoneka mune zvese zvazvinoreva, runako nehunhu, vakadaro Mai Abigail.
Chiitiko ichi chichaunzawo vanhu vemuAfrica vari mudiaspora nedzimwe nyika dzemuAfrica, shamwari dzeAfrica pamwe chete kuti vaone kukosha kweindasitiri inobatsira zvikuru mukusimudzira upfumi hwenyika uye inoumba mabasa, inounza mihoro uye inovandudza raramo nenharaunda mukondinendi yose.
ATD ichaitawo, kugadzirisa uye kutarisa mukati mechikamu chekushanyirwa kweAfrica uye kuunza pachena, matambudziko nematambudziko ari kukanganisa kukura nekusimudzirwa kwekushanya.
Ichaitawo mepu mhinduro dzekukura, budiriro uye kufambira mberi mune ramangwana kwechikamu chekushanya, kunyanya kusimudzira kuchengetedzwa kwayo nekuchengetedza.
Zuva richakurudzira chizvarwa chinotevera muruzivo uye kukoshesa tsika nemagariro eAfrica nhaka, zvakare kugadzira nekufambisa hukama ne "Africa for Africans" neFriends of Africa izvo zvinogona kushandura tarisiro yekushanya kwekondinendi kuita mikana yebhizinesi nekudyara.
Vatori vechikamu kuAfrica Tourism Day vachave chikamu chenhoroondo vozoona chimwe chinyorwa chinonakidza chechiitiko chekusaina cheAfrica chinoisa parutivi zuva rekondinendi rekurangarira gore rega rega kushanya uye kubatsira kwazvinoita kuhupfumi hweAfrica.
Zuva iri richarongawo nzira dzekukura nekushanya kweAfrica kondinendi, zvobva zvaunza pamwechete bhizinesi, mari, mikana yekudyidzana nevanobata mukati nekunze kweindasitiri.
Vatori vechikamu kuchiitiko zvakare, vachawana ruzivo uye zviito zvinodiwa kutora sezvazvinoshanda kune kushanya, kutengeserana, kusimba uye shanduko yemamiriro ekunze.
Zviitiko zvakawanda zvichange zvichicherechedza zuva reAfrica Tourism Day iro rinotarisirwa kuitika munyika dzakasiyana siyana dzemuAfrica kuburikidza nenhepfenyuro.
Africa Tourism Day yakatangwa muna 2020 (gore rapfuura) nekutora chikamu kubva kunyika makumi manomwe nepfumbamwe nevatauri makumi maviri nemumwe kubva kunyika gumi neimwe.
Dzvanya apa kuti ubatane neZoom musangano